75 Logos ku salaysan shimbiraha | Hal-abuurka Online
Twitter ayaa ahaa dhiirigeliyaha weyn ee isticmaalka shimbiraha ee naqshadeynta shabakadda, hadda waxay u muuqataa in boqollaal shirkadood ay ku biirayaan isbeddelka shimbiraha ee astaanta, iyaga oo ku guuleysta calaamado badan oo wanaagsan.
Aragtidayda waxaan u maleynayaa in xaaladaha qaarkood saameynta shirkadda Microblogging ay aad u muuqato. laakiin waxaa jira kiisas kale oo ay tahay raaxo dhab ah in la isticmaalo saameynta shimbiraha ee logotype.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad haysataa 75 calaamadood si ay kuu dhiiri geliso oo aad u xukunto boodada ka dib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » 75 Loogu talagalay shimbiraha